अनुसन्धान समितिले किन पत्ता लगाउन सकेन तस्करीको सुन ? - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद नथपिने भएको छ।
सरकारले २० चैतमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। दुईपटक म्याद थप्दा पनि तस्करीको सुन भेटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समितिको म्याद नथप्ने निष्कर्षमा पुगेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।
समितिलाई सुरुमा ४५ दिनको म्याद दिइए पनि थपेर ३ महिना १२ दिन पु¥याइएको थियो । यसबीचमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकृत र पूर्वडिआइजी समातिए । तर, तस्करीको सुन भने पत्ता लाग्न सकेन।
केही कानुनी जटिलताले काम अधुरो बन्न पुगेको समिति संयोजक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘करिब साढे तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् । घटनामा मात्रै ७५ भन्दा धेरैलाई विपक्षी बनाइएको छ । ४५ भन्दा धेरै समातिएका छन् । एक–दुईबाहेक सबै पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । केही फरार छन् । यसको अर्थ अनुसन्धान सकियो भन्ने होइन । काम बाँकी नै छ।’
तीन वर्षको अवधिमा ३८ क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको भनिएको छ । उक्त सुन विभिन्न नाका हुँदै भारतीय बजारमा पुगेको समितिले नै पुष्टि गरेको छ।
त्यसमध्ये पनि तस्करीमा सबैभन्दा धेरै वीरगन्ज नाका, विराटनगरको जोगबनी र झापाको काँकडभिट्टा नाका प्रयोग भएको बताइन्छ । तर, समितिले अनुसन्धान अवधिभर भन्सारका कुनै पनि कर्मचारीलाई फक्राउ गरेन।
तस्करीको सुन दुबईबाट नेपाल ल्याउन जति सजिलो छ, त्योभन्दा गाह्रो भुक्तानीबापतको रकम नेपालबाट दुबई पठाउन छ । समितिकै अनुसन्धानले तीन वर्षको अवधिमा १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुन तस्करी भएको देखाएको छ । तर, भुक्तानीबापतको उक्त रकम कसरी दुबई पुग्यो? समितिका संयोजक पौडेल यसको उत्तर सहज रूपमा दिन्छन्, ‘हुन्डीबाट।’
तर, समितिले हुन्डी करोबारी विमल पोद्दार र राजु दारुकाबाहेक अन्यलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । समितिका अनुसन्धान अधिकृत हुन्डी कारोबारमा मनि एक्सचेन्ज सेन्टरदेखि सहकारीसमेत संलग्न रहेको दाबी गर्छन् । तर, अनुसन्धानका लागि ती निकाय तानिएनन्।
‘तस्करीले सुनको भुक्तानी हुन्डीबाट गरेको देखिन्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवासमेत प्रयोग भएका छन् । केही हुन्डी करोबारी पक्राउ परे । अन्य पक्राउ गर्न बाँकी छ,’ पौडेलले भने।
किन असहयोगी बन्यो दुबई?
छानबिन समिति दुबई गएर सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची लिन चाहे पनि वातावरण बनेन । त्यसपछि नेपालस्थित दूतावासमार्फत सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची झिकाउने प्रयास ग(यो । दूतावासका कर्मचारी पनि राजी भए । चरण–चरणकोे छलफल चल्यो । तर, सुन खरिद गर्ने नेपालीको सूची दिन दुबई सरकार राजी भएन।
प्रकाशित ३ साउन २०७५, बिहिबार | 2018-07-19 06:53:27